'म मृत्युसँग डराउँदिन' भन्थे हकिङ : केही रोचक कुरा - खबरम्यागजिन
‘म मृत्युसँग डराउँदिन’ भन्थे हकिङ : केही रोचक कुरा
भौतिकशास्त्रका विद्वान सिद्धान्तकार एवं प्रचलित ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ पुस्तकका बेलायती लेखक स्टेफन हकिङको ७६ वर्षको उमेरमा लण्डनमा निधन भएको छ । सापेक्षवादको सिद्धान्त र ब्ल्याक होलबारे विभिन्न नयाँ तथ्य पहिल्याउने हकिङलाई भौतिकशास्त्रमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनपछिका प्रखर वैज्ञानिक मान्ने गरिन्छ। हकिङका छोराछोरी लुसी, रोबर्ट र टिमले भनेका छन्— ‘आज हाम्रा प्रिय बुबा बित्नुभएको छ, हामी मर्माहत छौं।’
‘म मृत्युसँग डराउँदिन । तर मलाई मर्नका लागि हतार छैन । मेरोलागि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ ।’
वर्तमान युगका महान वैज्ञानिक स्टिफन हकिङ यसै भन्थे । शारीरिक रुपले अशक्त भएर पनि उनी पुरै युग हाँक्ने वैज्ञानिक थिए। जबकी विद्यालय जीवनमा उनी अति सामान्य विद्यार्थी थिए। उनको पढाई-लेखाई राम्रो थिएन। उनको भविष्यप्रति शिक्षकहरु समेत चिन्तित थिए। तर, त्यही कमजोर बालक स्टीफन हकिंगको रुपमा विख्यात भए, भौतिक विज्ञानको आलोकमा टेकेर। शारीरिक कमजोरीले प्रतिभालाई रोक्दैन भन्ने उनी आफैमा उत्कृष्ट दृष्टान्त हुन्। उनै महान वैज्ञानिकले विभिन्न सन्दर्भमा व्यक्त गरेका विचारहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसले हाम्रो जीवन र दृष्टिलाई बदल्न सक्छ।
जन्म – ८ जनवरी १९४२, अक्सफोर्ड, बेलायत
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा १९५९ मा प्राकृतिक विज्ञानको अध्ययन, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट पिएचडी प्राप्त
१९६३ मा २१ वर्षको उमेरमा उनमा मोटोर न्युरोन रोग रहेको पत्ता लागेको थियो र चिकित्सकहरूले २ वर्ष बाँच्ने बताएका थिए
१९७४ मा ब्ल्याक होलहरूले “हकिङ रेडिएसन” उत्सर्जन गर्ने सिद्धान्त पत्ता लगाए
१९८८ मा “अ ब्रीफ हिस्ट्री अफ टाइम” पुस्तक प्रकाशित गरे, जुन हालसम्म १ करोडभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ।
२१ वर्षे एक युवा । जसको सपना थियो– यो संसारलाई बदलूँ ।
तर, सोचेको जस्तो भएन । अचानक त्यो सपनामा ठेस लाग्यो । चल्दाचल्दै एक दिन ती युवा ढले ।
पहिले सोचिएको थियो– यो सामान्य हो, खासै केही भएको छैन । तर, चिकित्सकले जब चेकजाँच गरे, अनि बल्ल भयंकर रोग लागेको थाहा भयो ।
यो सुन्दा अपत्यारिलो घटना हो– स्टेफन हकिङको जीवनको ।
त्यति बेला स्टेफन हकिङ २१ वर्षका मात्र थिए । र, चिकित्सकले उनलाई उमेरको काउन्टडाउन दिएका थिए– अब तिमी २/३ वर्षमात्र बाच्छौँ ।
सन् १९४२ मा अक्सफोर्डमा जन्मिएका हकिङका पिता रिसर्च बायोलोजिस्ट थिए । उनी जर्मनीको बमबारीबाट बच्नका लागि लन्डनबाट अक्सफोर्डमा गएर बसेका थिए ।
हकिङको पालनपोषण लन्डनमा भयो । उनी सेन्ट अल्बंसमा पनि बसे । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट फस्र्ट क्लास डिग्री लिएपछि स्टेफन क्याम्ब्रिजमा गए ।
सन् १९६३ मा यही विश्वविद्यालयमा हुँदा उनलाइ यो भयंकर रोग लागेको थाहा भयो ।
कलेजमा हुँदा हकिङलाई घोडचडीमा बहुतै शोख थियो । तर, जब उनी बिरामी भए, उनले उनको यो बिमारी त्याग्नु पर्ने भयो ।
सन् १९६४ को कुरा हो । उनी जेनसँग विवाह गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । चिकित्सकले त्यति बेला नै उनलाई दुई देखि तीन वर्ष मात्र बाँच्ने अल्टिमेटम दिए ।
तर, हकिङलाई भाग्यले साथ थियो । उनको यो बिमारी विस्तारै फैलियो ।
उनलाई लागेको यो बिमारी थियो– मोटर न्युरोन डिजिज ।
एनएचएसका अनुसार यो एक असाधारण स्थिति हो जसले दिमाग तथा स्नायुमा असर गर्छ । यसले शरीरमा कमजोरी पैदा गर्छ र विस्तारै यो बढ्दै जान्छ ।
यो बिमारीको कुनै उपचार छैन, यो लागेपछि मृत्युलाई कुर्नु नै अन्तिम विकल्प हो ।
यो बिमारी लाग्न सुरुवात हुँदा कमजोरी महसुस हुन्छ, हिड्दा एक व्यक्ति लडखडाउन सक्छ । बोलीमा पनि कमजोरी देखिन थाल्छ । मासंपेशीमा विस्तारै तनाव हुन्छ र मासंपेशीहरु दुख्न थाल्छन् ।
मोटर न्युरोन बिमारी त्यस्तो समस्या हो जो कसैलाई पनि हुनसक्छ । तर, यो अधिकांश ६०÷७० वर्ष पारका व्यक्तिहरुमा देखिन्छ ।
१. भौतिकशास्त्रमा यति धेरै कहलिएका हकिङले अहिलेसम्म नोबेल पुरस्कार पाएनन्।
३. स्कुले जीवनमा हकिङ नजान्ने विद्यार्थीमा गनिन्थे । ९ वर्षको उमेरमा उनी खराब नजिता ल्याउने विद्यार्थीको सूचीमा परेका थिए।
५. स्कुल पढ्दाताका उनी घरको भित्तेघडी र रेडियो खोलखाल पार्न रुचाउँथे, तर त्यसलाई जोडेर पूर्वावस्थामा ल्याउन भने उनलाई प्रायः आउँदैनथ्यो । उनको यस्तो बानीले घरका सबै दिक्क भएका थिए।
७. हकिङको यो भनाइ सबैभन्दा बढी चर्चित छ, ‘ब्रह्मान्डको सीमा स्थितिबारे अत्यन्त विशेष कुरा पक्कै छ। ब्रह्मान्डको कुनै सीमा नै छैन भन्ने कुराभन्दा विशेष अरू के हुन्छ र?’
१०. हकिङले दुई पटक बिहे गरे। तर, उनको दुवै विवाह असफल भयो। सन् १९६५ मा जेन वाइल्ड नाम गरेकी युवतीसँग बिहे गरेका थिए। उनीबाट हकिङले तीन सन्तान प्राप्त गरे। जेनलाई छोडेर हकिङ पछि इलेन मेसन नाम गरेकी नर्ससँग लहसिए। उनीहरूले सन् १९९५ मा बिहे गरे। सन् २००६ मा उनीहरूको सम्बन्ध–विच्छेद भयो।
११. उनको आत्मसंस्मरण ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ बेस्ट सेलर पुस्तक हो। यसको अढाइ करोड प्रति दुई वर्षअघि नै बिक्री भइसकेको थियो।
१३. सन् २००९ मा उनलाई अमेरिकामा प्रेसिडेन्सियल मेडल अफ फ्रिडम प्रदान गरिएको थियो। अमेरिकी सरकारले प्रदान गर्ने यो सबैभन्दा ठूलो नागरिक सम्मान हो।
१५. स्पिच जेनरेटिङ डिभाइसको सहायताले उनी प्रतिमिनेट १५ शब्द बोल्न सक्थे।
हकिङ-का प्रेरक भनाइहरू
१. स्कुलमा म आफ्नो कक्षामा राम्ररी पढाई गर्न सक्दिनथे। त्यो एकदमै राम्रो कक्षा थियो । मेरो कक्षाकार्य एकदमै नराम्रो हुन्थ्यो । मेरो लेखाइले शिक्षकलाई निराश तुल्याउँथ्यो । तर, मेरा सहपाठीहरुले मलाई आइस्टाइन नामले बोलाउथे । त्यो सायद उत्कृष्ट संकेत थियो ।
मुख्य समाचार, विदेश